‘सेक्सबारे भारतीय कुरा गर्दैनन्, त्यसैले म उनको मद्दत गर्छु’ « AayoMail
‘सेक्सबारे भारतीय कुरा गर्दैनन्, त्यसैले म उनको मद्दत गर्छु’
भारतका स्कुल सेक्सबारे पढाउँदैनन्। त्यसोभए, सेक्स र सम्बन्धबारे बच्चालाई सम्झाउने जिम्मेवारी उनीहरूको आमा–बाबुमाथि आउँछ।
सेक्स कोच पल्लवी बर्नाल प्रायः आमा–बाबुलाई नै थाहा हुँदैन कि सेक्सका बारे बच्चालाई के भन्नु छ।
पछाडि फर्केर हेर्दा मेरो पारम्परिक भारतीय पालन पोषणले मलाई सेक्स कोच बन्ने आधार तयार गरिदिएको जस्तो लाग्छ।
म माथि यसको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव मेरो आमा बाबुको सम्बन्धको परेको थियो। हुन त, त्यतिबेला मलाई यसको अनुभूति भएको थिएन।
मेरो आमा बाबुको बिहेलाई लिएर वर्षौंसम्म अफवाह फैलिइरहेको थियो। जतिबेला म ८ वर्षको थिएँ, त्यतिबेलादेखि नै मलाई अनौठाखाले प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको थियो।
भोजभतेरमा केहीबेरका लागि मात्रै आफ्नो परिवारसँग टाढा हुँदा, कतिपय महिलाले मलाई घेरा हालेर आमाबाबुको सम्बन्धबारे सवाल गरेर हैरान पार्दथे।
‘के तिमीले दुबै जनाबीच लडाइँ भएको देखेकी छौ?’, ‘के तिम्रो घरमा कुनै अरू पुरुष आउने जाने गरेका छन्?’
टेबलनजिक उभिएर चम्चाले आइसक्रिम निकाल्न खोजिरहेको हुन्थे, वा खेल्नका लागि गार्डेनमा अन्य बच्चालाई खोजिरहेको हुन्थे कि अचानक महिलाहरूको भीड मलाई घेरा हालिहाल्थ्यो।
उनीहरूलाई बुझ्न र जान्न बाँकी नै हुन्थ्यो, त्यतिबेलासम्म उनीहरूले यस्तो प्रश्न गर्दथिन् जसबारे म पूरा अनभिज्ञ हुन्थे। र, मलाई यो पनि थाहा हुँदैन थियो कि, त्यसको सही जवाफ के हो?
वर्षौंपछि, मेरो आफ्नै सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि, मेरी आमाले पूरा कथा सुनाइन्। मेरो आमाबाबुको बिहेको सुरूवाती दिनमै, म र मेरो भाइले जन्म लिनुअगावै, मेरो आमालाई एक पुरुषप्रति जबरजस्त आकर्षण महसुस भयो।
पछि यो लगाव शारीरिक सम्बन्धमा बदलियो। तर, केही हफ्ताभित्रै मेरी आमा अपराधबोधको शिकार भइन् र सम्बन्धलाई अन्त्य गरिन। तर, भारतीय समाजमा तपाईंमाथि अरू मानिसहरूको नजर हुन्छ। त्यसपछि तपाईंबारे कुरा गर्न थाल्छन्। अन्त्यमा यो कुरा मेरा बाबुले थाहा पाए।
दश वर्षपछि र दुई सन्तान भइसकेपछि मेरो बाबुले हिम्मत जुटाउन सके कि मेरी आमासँग त्यो सम्बन्धबारे सोध्न सकुन्।
उनले वचन दिए कि, आमाको जवाफ से सुकै होस्, त्यसको असर सम्बन्धमा पर्दैन। वर्षौदेखि उनले जुन कानेखुसी सुन्दै आइरहेका थिए, त्यसको वास्तविकता उनलाई जान्नुपर्ने थियो।
आमाले उनलाई सबै कुरा बताइ दिइन्। आमाले भनिन्, त्यो सम्बन्ध सेक्सका लागि कम र नजिकपनका लागि बढी थियो।
बच्चा जन्मिनुअघि त्यो सम्बन्ध बनिसकेको थियो। बिहेपछि सम्बन्धमा मजबुती आउन पनि बाँकी थियो।
तर, जब मेरी आमाले बोल्न बन्द गरिन्, उनले अनुभव गरिन् कि कोठामा चिसोपना फिजिएको छ। जुन कुराको उनलाई आशंका थियो। अन्ततः त्यो सही सावित भयो र दुबैजनाबीचको भरोस टुट्यो। त्यसपछि दुबैजनाको सम्बन्ध थप बिग्रिँदै गयो।
त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि हामीले सेक्स र नजिकपनबारे स्पष्ट कुरा नगर्दा परिवार टुट्छ। मेरो परिवार, पूर्व भारतको बिहारबाट आउँछ। यो देशकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रमध्ये एक हो र नेपालसँग जोडिएको छ। गंगा नदी यसको मैदानी क्षेत्रका लगभग बीचबाट गुज्रिन्छ।
मेरा बाल्यकाल ज्यादै रूढीवादी माहोलमा बित्यो। अरू परिवारजस्तै, हाम्रो घरमा पनि सेक्स यस्तो कुरा थियो जसबारे खुलेर कुरा हुँदैन थियो।
मेरो आमाबुवाले कहिल्यै सबैसामू एकअर्काको हात समाउन सकेनन् न कहिल्यै अंगालो नै हाल्न सके। यो मेरो आमाबुवासँग मात्रै होइन, हाम्रो समुदायका कोही पनि यसखाले आफ्नो लगाव अभिव्यक्त गर्न सक्दैन थे।
सेक्सबारे मलाई पहिलो जानकारी १४ वर्षको उमेरमा भयो।
दिनको समय थियो। मैले बुवाको दराजमा राखिएको किताबहरू खोतलिरहेको थिएँ। उनले राखेको उपन्यास र इतिहासको किताबको बीचबाट एक पम्पलेट भुइँमा झर्यो।
त्यसमा सेक्सबारे रहस्यमयी र गोपनीय दुनियाँसँग जोडिएका छोटा कथाहरू थिए। जसमा पुरुष र महिला एकअर्काको शरीरबारे पड्ताल गरिरहेका थिए। यो त स्पष्ट थियो कि, त्यो साहित्यको किताब थिएन।
एउटा कथा त्यस्तो युवतीको बारेमा थियो, जसले पर्खालमा यसकारण प्वाल बनाएकी थिइन् जहाँबाट एकजना आफन्त दम्पतीको शारीरिक सम्बन्धलाई हेर्न सकियोस्। त्यो किताबमा मैले एउटा कठिन शब्द ‘चुम्बन’ भेटेँ, त्यसको अर्थ बुझ्न मलाई शब्दकोषको मद्दत लिनुपर्यो।
मेरो मनभित्र धेरै प्रश्नहरू उब्जियो। तर, यसबारे कुरा गर्ने कोही थिएन। मैले या मेरा साथीहरूले सेक्स के हो, कहिल्यै कुरा गरेका थिएनौं।
त्यो किताब पढ्न यति धेरै मग्न भएँ कि मलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्कन र आमाको आवाज सुन्न पनि धेरै समय लाग्यो। जसले अर्को कोठाबाट मलाई बोलाइरहेकी थिइन्।
त्यो १९९० को दशकको अन्त्यतिर थियो। त्यतिबेला मलाई यो थाहा थिएन कि, मैले केही गल्ती गरेको छु। त्यो उमेरमा अधिकांश बच्चा नजिकको सम्बन्धबारे बुझिसकेका हुन्थे, त्यो पनि स्कुलमा।
बेल्जियममा बच्चालाई ७ वर्षकै उमेरमा सेक्सबारे पढाउन सुरू गरिन्छ। तर, भारत त्यस्तो देश होइन, जहाँ सेक्स शिक्षा पाठ्यक्रमको अनिवार्य भाग बनोस्।
वास्तविकता त यो छ कि, २०१८ मा स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्रालयले विद्यालयहरूमा सेक्स शिक्षाको गाइड लाइन जारी गरेको थियो। भारतको दर्जनभन्दा बढी राज्यले त्यो दिशा निर्देशलाई लागु नगर्ने निर्णय गर्यो। द टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार, ग्रामीण भारतका आधाभन्दा बढी युवतीहरूलाई महिनावारीबारे जानकारी नै छैन।
बुवाको किताबबाट भेटिएको त्यो पम्पलेटबाट सेक्सबारे नयाँ कुरा खोज्ने सिलसिला सुरू भएन। वास्तविकता त यो छ कि, त्यो कुराहरू मेरो मनभित्रै दबिएर रह्यो। र, भारतका अन्य युवतीहरूजस्तै म पनि पारम्परिक बनेर बसिरहेँ।
मैले २५ वर्षको उमेरमा आफ्नो ‘भर्जिनिटी’ गुमाए। र, १० वर्षपछि जब मेरो बिहे भयो त्यतिबेला पनि सेक्सबारे अनभिज्ञ नै थिएँ।
मेरो सुहागरातलाई तपाईं ठूलो असफलता नै भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो ससुरालमा हाम्रा लागि तयार पारिएको ओछ्यान देखेपछि, मलाई हाँसो आयो। ओछ्यानमा फूल छरिएको थियो। कोठाको पात्लो पर्खाल पारी परिवार र आफन्तहरू कुरा गरिरहेका थिए। त्यहाँ एक दर्जनभन्दा बढी मानिसहरू थिए। उनीहरू हाम्रो कोठाको बाहिर सुतिरहेका थिए, किनभने घरमा अरू ठाउँ नै थिएन।
मेरी आमाले मलाई भनेकी थिइन् कि, मैले मेरो पतिलाई कुमारी नै रहेको बताऊँ। सुहागरातमा मलाई लजालु भएको नाटक पनि गर्नुपर्ने थियो। के गरौं भनेर म बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। ज्यादै कठिनाईका साथ म र मेरो पति एकअर्कासँग कुरा गर्यौं।
बेडरूममा हामी एक साथ थियौं। म कुमारी त थिइनँ, तर म त्यो रातको लागि तयार पनि थिइनँ। आज पनि मलाई दर्जनौं सन्देशहरू आउँछ, जसमा सोधिएको हुन्छ कि सुहागरातमा के गरौं? ती प्रश्नहरू केवल शारीरिक सम्बन्धबारे मात्रै हुँदैन, बरू त्यस रातको व्यवहारबारे पनि हुन्छ। मानिसहरू यो पनि जान्न चाहन्छन् कि, उनीहरू कसरी बढी लजालु पनि नलागुन् र न अनुभवहीन।
म आफ्नो पतिसँग करिब पाँच वर्ष सँगै बसेँ। सुरूदेखि मलाई लागिरहेको थियो कि मैले कुनै गलत मानिससँग बिहे गरेको छु। उनीसँग सेक्स गर्नु मेरो लागि ज्यादै डरलाग्दो अनुभव बनिसकेको थियो। हामीले सेक्सका लागि समय र मितिमाथि मोलमोलाइ गर्ने गरेका थियौं।
जतिबेला आफूसँगै काम गर्ने मानिसबारे मैले कल्पना गर्न थालेँ, मैले बुझिसकेको थिएँ कि मेरो वैवाहिक जीवन अब अगाडि चल्न सक्दैन। म त्यो कामकाजी साथीका साथ अगाडि त बढिनँ। विवाहित भइसकेकोले अरूसँग सम्बन्ध राख्न चाहिनँ। तर, हाम्रो सम्बन्धविच्छेद भयो।
३२ वर्षको उमेरमा एक सन्तानको आमा बनेँ। म माथि कुनै दबाब थिएन। सम्बन्धविच्छेद भइसकेको एक महिला थिएँ र समाजको नजरमा तल गिरिसकेको थिएँ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा बस्दै गर्दा मैले धरै मानिससँग यौन सम्बन्ध बनाएँ। त्यस्तो सम्बन्ध, जसको कुनै भविष्य नै थिएन। मैले यसबारे धेरै अनुभव हासिल गरेँ। मैले बढी उमेर र विवाहित पुरुषसँग सेक्स गरेँ। जबजब म मित्र खुलापन आउँदै गयो, मेरा कुराहरूमा पनि परिवर्तन भयो, जुन कि म मानिसहरूसँग गर्ने गरेको थिएँ।
मेरा विवाहित साथीहरू मसँग सल्लाह लिन थाले। मेरो स्वतन्त्रताबाट प्रेरित भएर आमा पनि म सँगै बस्न थालिन्। त्यसो पनि उनीभित्र विद्रोहको आगो बलिरहेको थियो।
मेरो वरिपरी धेरै महिलावादी चर्चा हुने गर्दथ्यो। जसमा सेक्स र महिला अधिकारबारे कुरा हुन्थ्यो। २०१२ मा दिल्लीमा गुडिरहेको एक बसमा युवतीसँग भएको बलात्कारको घटनाले पूरा सहरलाई हल्लाएर राखिदिएको थियो।
तर, मेरो लागि चिन्ताको कुरा यो थियो कि, सेक्सलाई हिंस्रक घटनाको रूपमा प्रस्तुत गरिँदै थियो। सेक्सलाई आनन्द लिने कुराको रूपमा बताइएको थिएन।
त्यसो पनि भारतकी महिलाहरू कोहीसँग नजिकबाट आनन्द लिने यस्तो कुरा बताउँदिनन् जसमाथि उसको नियन्त्रण नहोस्। यसबारे ज्यादै मौनताको भाव छ। यही कारणले जतिबेला युवाको शोषण हुन्छ, अधिकांश समय उनीहरूलाई जानकारीसमेत हुँदैन।
त्यतिबेला म कस्टमर सेल्सको पेशासँग जोडिएको थिएँ। मैले आफ्नो करियरको परिवर्तनबारे सोच्न सुरू गरिसकेकी थिएँ।
मलाई अनुभूति भयो कि एक यस्तो स्थान बनाउन सकिन्छ, जहाँ कसैको बारेमा कुनै राय कायम नगरेरै खुलेर सेक्सबारे कुरा गर्न सकिन्छ। एउटा त्यस्तो मञ्च जहाँ मानिस म सँग प्रश्न गर्न सकुन।
मैले सेक्स र न्युरो लिंग्युस्टिक प्रोग्रामिंग कोचको तालिम लिन सुरू गरेँ। मैले इन्स्टाग्राममा आफ्नो पेज बनाएँ। मैले मानिसहरूलाई भने मसँग प्रश्न गर्न सक्नु हुन्छ। कुराकानीका लागि मानिसको उत्साह बढाउन मैले सेक्ससँग जोडिएका आफ्ना अनुभव विस्तारका साथ लेख्न थालेँ।
त्यसको असर भयो। मानिसहरू मसँग सल्लाहका लागि सम्पर्क गर्ने थाले। उनीहरू सेक्सुअल फेन्टासी, हस्तमैथुनबारे भनिने गलत कुरा, सेक्सविहीन विवाहित जीवन र अन्य मामिलाबारे मसँग सल्लाह लिन थाले। त्यसमा यौन शोषणका प्रश्नहरू पनि थिए। कतिपय प्रश्न आमा-बाबुबारे बच्चाहरूले गर्ने गरेका छन्।
आमा-बाबुलाई पल्लवीको सल्लाह
सुरूवात यहाँबाट गरौं कि बच्चालाई सेक्सबारे जान्नु किन जरूरी छ?
सेक्स र सेक्सुआलिटीबारे कुरा गर्दा तपाईंको बच्चा जीवनमा धेरै समस्याबाट जोगिन सक्छन्। शरीरलाई लिएर चिन्ता, यौन शोषण, बोझ बन्ने सम्बन्ध र सेक्सलाई लिएर उपभोत्तावादी बन्ने दुरगामी समस्यमा हुन्। जसको सामना बच्चाहरूले ठूला भएर गर्छन्।
बच्चाले आफ्ना आमा-बाबुको अनुभवलाई चाँडै आफूसँग जोड्ने गरेका हुन्छन्। तपाईं ठूलो हुँदैगर्दा तपाईंको अनुभव कस्तो थियो यो कुरा बुझ्न बच्चा ज्यादै इच्छुक हुन्छन्। उनीहरू तपाईंलाई असल र काबिल मानिसको रूपमा हेर्न खोजेका हुन्छन्। जसले आफैं पनि गल्ती गरेका थिए। यदि तपाईंले आफ्नो बाल्यकाल बेलाको सेक्सको अनुभव, चुनौति र अफवाहबारे कुरा गरे तपाईंसँग बच्चाले बढी लगाव महसुस गर्नेछन्।
आफ्ना बच्चासँग सेक्सको मूल्यबारे कुरा गर्नुस्। तपाईं नग्नताबारे, किशोर उमेरमा डेटिङका बेला सेक्स, समलैंगिक विहे, गर्भपात, गर्भ रिोधक, विवाहपूर्व सेक्स, सेक्सका लागि उपयुक्त उमेरलागयतका विषय बच्चाहरूलाई बताउनुस्। यसले सेक्सबारे बच्चालाई मूल्य र सिद्धान्त बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।